Iri Bhizinesi Rako Riri Kutora Kubatsira Kwemagariro Vhidhiyo? | Martech Zone
Muvhuro, September 15, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mangwanani ano takatumira Nei Bhizinesi Rako Richifanira Kushandisa Vhidhiyo Mukushambadzira. Imwe nzira yekushandisa vhidhiyo iri kutyaira zvisingaite kubatanidzwa uye mhedzisiro masocial vhidhiyo masosi, ane yakakura kukura mukushandisa uye kuona. Makambani ari kutora mukana wezano iri uye kugadzira zvimwe zvirinyore uye zvinoshamisa mhedzisiro iri kutariswa zvakanyanya, yakagovaniswa zvimwe, uye kutyaira kwakadzama kwekunzwisisa kwavo brand uye yakakwira kutendeuka mitengo.
Kunze Youtube, kune mamwe akawanda mapuratifomu evhidhiyo. anouya, Vimeo, Google+ Hangouts uye Instagram ndidzo nzvimbo dzese dzakanaka dzekugovana vhidhiyo uye kutora chikamu munharaunda yemagariro e-kushambadzira nema hashtag uye meta-ruzivo. Dhizai kupinda munyika yemagariro vhidhiyo nhasi! Batanidza nevanhu uchinge uchiwedzera kune inowanika nhaurwa pane yako kambani uye brand ine inodzokororwa, inonakidza uye inoshanda yevhidhiyo macampaign. Megan Rigger, Sigma Webhu Kushambadzira.
Mamwe makambani makuru anogona kuyedzwa gadzira vhidhiyo vega asi isu hatidi kuraira izvozvo. Heano kuputsika kwenzvimbo dzepamberi dzemavhidhiyo masosi uye dzinoenderana nhamba dzevateereri. Uine mari hombe yekudyara, unogona kukunda matambudziko ekubata - asi hauzombobata mukana wevateereri anowanikwa nenzvimbo idzi:
Youtube ndiyo yechipiri yakashanyirwa saiti pasirese uye yechipiri yakakura injini yekutsvaga - ine vanopfuura bhiriyoni bhiriyoni kushanya pamwedzi uye anopfuura mabhiriyoni matanhatu emaawa evhidhiyo akatariswa mwedzi wega wega.
Vimeo inopa mabhizinesi neimwe nzira inokwezva kune YouTube. Inopfuura 250,000 nzvimbo dzinoshandisa Vimeo.
Google Hangouts nguva pfupi yadarika yakaverengerwa muGoogle Apps uye iri nzira iri nyore yekugovana mhenyu demo uye kubvunzurudza, wozovagovana kwenguva inotevera
Instagram yakatanga senge photosharing saiti asi ikozvino inotsigira vhidhiyo. Pakazosvika Gumiguru wa2013, 40% yemavhidhiyo akagovaniswa zvakanyanya akagadzirwa nemhando.
anouya imhando yeiyo Twitter yevhidhiyo (uye ndeya Twitter), ichibvumira kuti mavhidhiyo mapfupi agovaniswe. Ivo havana hupenyu hwakareba, zvakadaro!
Tags: google hangoutsInstagraminstagram marketingyemagariro vhidhiyovhidhiyo vhidhiyo yebhizinesiVimeovimeo kushambadziramuzambiringakutengeswa kwemuzambiringaYouTubeyoutube kushambadzira
Sep 16, 2014 na12:49 PM
Mabhizinesi ese anofanirwa kushandisa kushambadzira kwevhidhiyo Ndinobvuma 100%! Ndine mabloggi akati wandei anosimbisa pfungwa iyi. Kwete chete kushambadzira kwevhidhiyo kunofanirwa kuve imwe yenzira dzako huru dzekushambadza asi kuziva nzira yekuita nemazvo iwo mavhidhiyo kuitira kuti vapfume mune zvemukati uye vagadziriswe SEO.Kwete chete mabhizinesi anofanira kutora nguva yekuita vhidhiyo kushambadzira ivo vanofanirwa kuita mavhidhiyo avo. kodzero kana mavhidhiyo avo uye/kana bhizinesi harizomboonekwa. Yakanaka kwazvo positi pakushambadzira kwevhidhiyo!